दाङमा प्रहरीकै बीचबाट थुनुवा भागेपछि प्रहरी पक्राउ
कार्तिक २८, दाङ ।
एक जना थुनुवा प्रहरीकै बीचबाट भागेपछि सुरक्षार्थ गएका एक जना प्रहरी जवान पक्राउ परेका छन्।
सार्वजनिक अपराध अर्थात् नैतिकताविरूद्धको कसूर गरेको अभियोगमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५ रानीजरुवा निवासी १९ वर्षीय विष्णु बुढाथोकी प्रहरीकै बीचबाट भागेपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरमा कार्यरत प्रहरी जवान शेरबहादुर बुढाथोकी पक्राउ परेका हुन्।
प्रहरी जवान बुढाथोकीले थुनामा रहेका विष्णु बुढाथोकीलाई भगाउन भूमिका खेलेको हुँदा पक्राउ गरेर सामाजिक न्यायविरूद्धको कसूर ऐन अन्तरगत मुद्दा चलाइएको ईप्रका तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रेमबहादुर शाहीले बताए।
उनले दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले प्रहरी जवान बुढाथोकीलाई ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमती प्रदान गरिसकेको जानकारी दिए।
चोरी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ निवासी २४ वर्षीय अर्का एकजना थुनुवा वसन्त बस्नेतले पनि विष्णु बुढाथोकीलाई भगाउन भूमिका खेलेको आशंका ईप्रकाले प्रहरी जवान बुढाथोकीलाई जस्तैगरी सामाजिक न्यायविरूद्धको कसूर ऐन अन्तरगत मुद्दा चलाएको छ।
बस्नेत चोरी गरेको अभियोगमा कात्तिक २० गते पक्राउ परेका थिए भने प्रहरी कै बीचबाट भाग्न सफल बुढाथोकी व्यक्ति कुटपिट गरेको अभियोगमा कात्तिक २३ गते पक्राउ परेका थिए ।
बुढाथोकी कसरी भागे ?
कात्तिक २३ गते व्यक्ति कुटपिट गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका विष्णु बुढाथोकी तिहारको विदाको कारण २ दिनदेखि ईप्रका तुलसीपुरको थुनामै थिए।
त्यसैले उनलाई आइतबार मात्रै म्याद थपको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही लगिएको थियो। त्यो बीचमा थुप्रै जुवाडे पनि पक्राउ परेका थिए। ३३ जनालाई म्याद थपका लागि घोराही लैजान ईप्रका तुलसीपुरले एउटा सार्वजनिक बसको व्यवस्था गरेको थियो। बयान सकेर ५ दिनको म्याद थपेर ईप्रका तुलसीपुर ल्याइपुर्‍याउँदासम्म झिसमिसे साँझ परिसकेको थियो।
विष्णु बुढाथोकी बसको दायाँतिरको अन्तिम सिटमा बसेका थिए । त्यही सिटमा चोरी अभियोग लागेका बस्नेत र प्रहरी जवान बुढाथोकी लहरै बसेका थिए । जब ईप्रका आइपुग्न पुग/नपुग एक डेढसय मिटर टाढा थियो त्यतिबेला नै विष्णु बुढाथोकीले गुडिरहेको बसबाट हाम फालेर भागे।
उनले झ्यालको सिसाको सपोर्टको लागि राखिएको फलामे एंगल उप्काएर त्यहीबाट हाम फालेका थिए। झ्यालबाट विष्णु हाम फालेर भागेपछि प्रहरी ढोकाबाट झरेर उनलाई लखेटे। नजिकै भएको हुँदा ईप्रका तुलसीपुरबाट अरु प्रहरी पनि समात्न भनि दौडिए । तर विष्णु झिसमिसे साँझमा कता पुगे त्यसको भेउ प्रहरीले लगाउन सकेन ।